အက်ရ်ှဘရီနဲ့ Languageကဗျာ (ဇေယျာလင်း) | လမ်းအိုလေး
အက်ရ်ှဘရီနဲ့ Languageကဗျာ (ဇေယျာလင်း)
January 9, 2011 by lanolay	Leaveacomment
ဆရာကြီး အက်ရ်ှဘရီဟာ တစ်နေရာမှာတော့ ဆိုထားလေရဲ့။ LP ကဗျာသမားတွေနဲ့ သူဟာ ဘာမှမတော်စပ်၊ ဘာမှမပတ်သက်၊ ဘာမှ ဆက်နွယ်စရာအကြောင်း မရှိပါ တဲ့ …
Categories: Articles, Cover Arts, L=A=N=G=U=A=G=E | Tags: ဂျွန်အက်ရ်ှဘရီ, ဂျွန်အက်ရ်ှဘရီနိဒါန်း, ဇေယျာလင်း, John Ashbery, L=A=N=G=U=A=G=E, post modern, zeyar lynn | Permalink.	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...
ငြိဏ်းဝေTop Posts	နှောင်းမှပြောင်းတတ်သော အချစ်တစ်မျိုး (မြင့်သန်း)	သူမ၌တွေ့ရှိရသော ငါ၏ ချစ်ခြင်း (မြင့်သန်း)	မိသားစုအရေး (ဒီနိုဗို)	Recent Comments	ကောင်းခန့်ကျော် on ၁၉၉၀ အထူးသီးသန့်​ (သီဟသူ)Aung OO on တိမ်လွှာမို့မို့လွင်မှသည် ပို့စ…helionpoem on ကြယ်တွေငိုလျှင် (နေမျိုး)lanolay on အနေအထိုင် မတတ်မှုများ (လှသန်း)lanolay on အနေအထိုင် မတတ်မှုများ (လှသန်း)	Archives	Archives
လ﻿ရောင်﻿လမ်းသာတူညီမျှကမ္ဘာ (Harrison Bergeron) ပန်ဒိုရာစိမ်းရွက်နုပေါ်က မိုးရေစက်များ Burmese Poetry FoundationUntitled ဖော်ဝေး ဒိုင်ယာရီ၂၉၊ ဇှနျဟိုးအတိတျဆီက ငါတဈယောကျကိုနှေးထှေးကွညျမှစှေ့ာပွနျတှလေို့ကျရပွနျတယျ။ တူမလေး ပြျောပါစေ... မိုးလှိုင်ညအတွေးရုပ်ကြွင်းများ မောင်ဖုန်းမြင့်အခုဆို မြို့ဟာ ခိုတွေမရှိတော့ဘူး ။ နေ၀ိုင်ဝိုင်ငါမရှိလည်း ” ငါမရှိခြင်း “က အခန်းထဲ … လွန်းဆက်နိုးမြတ်ဝေးကွာ သီဟသူခြာတိတျဘဝ-၉ သုနိုင်ငံAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. သော်ဇင်အုန်းကဗျာက ထထ အော်တယ် ဟိန်းတစ်နေ့ လူများ၊ သက္ကရာဇ်များ – ကဗျာအိမ်ပြန်ချိန် ﻿အောင်﻿ခင်﻿မြင့်﻿An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. Aung Khin MyintAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. K0NT3MP03TRY [ZYL]An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. Maung Day’s Blogရေအောက်သစ်တောများ PEM Skool PoetryAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. Poem EchoUntitled TH03 HTAN3 [aNTIMa]ခင်ဗျားဟာ… The Fepbမြင့်မြတ်သော ကြောင်များBlogroll
Stat Counter	Site Stats	209,855 views